Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » United Airlines: Makà jab COVID-19 na very
United Airlines: mahazo jab na very
Ireo mpiasan'ny United Airline izay mandà ny vaksinin'ny COVID-19 dia tsy avela hiditra any amin'ny toeram-piasana aorian'ny 2 Oktobra.
United Airlines dia manambara ny baikon'ny vaksiny COVID-19 ho an'ny mpiasa.
Ny United Airlines izay mandà ny jab COVID-19 dia horoahina.
Ireo mpiasa fiaramanidina manana fanavotana vaksiny dia hapetraka amin'ny fialan-tsasatra tsy voafetra.
Tao amin'ny memo an'ny orinasa iray nalefa omaly, dia nanambara ny United Airlines fa ny mpiasa rehetra ao amin'ny kaompaniam-pitaterana an-tany izay mahazo fanavotana amin'ny vaksiny coronavirus tsy maintsy aloa na amin'ny fialan-tsasatra tsy voaloa na ara-pahasalamana mandritra ny fotoana tsy voafetra, na inona na inona antony na tsia.
"Raha vantany vao mihena ny areti-mandringana, dia horaisina an-tanan-droa amin'ny ekipa ianao amin'ny toe-javatra mavitrika," ny mpanamory fiaramanidina, ny mpikarakara ny sidina ary ny mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa - nofaritana ho mpiasa ao amin'ny "anjara asa atrehin'ny mpanjifa miasa" - dia notantaraina tao amin'ny memo iray.
United Airlines ny mpiasa tsy mifanerasera mivantana amin'ny mpandeha, toy ny dispatser sy ny mekanika izay nahazo fankatoavana dia tsy maintsy hosedraina isan-kerinandro sy hisaron-tava amin'ny fotoana rehetra any am-piasana, ao anatin'izany ny any ivelany.
Izay mahazo famotsoran-keloka amin'ny fitsaboana dia halefa amin'ny fialantsasatra fitsaboana vetivety. Ireo izay nolavina ny fangatahana fanavotana dia tsy maintsy handray ny fitifirana voalohany hatramin'ny 27 septambra ary hatao vaksiny tanteraka ao anatin'ny dimy herinandro na very asa tanteraka, hoy ny memo nalefan'ny VP momba ny loharanon-karena mahaolona Kirk Limacher.
Ny fitantanan-draharahan'ny United Airlines dia tsy nilaza mazava ny fahavononan'ny mpitatitra hanome ny fangatahana fanavotana, ary tsy nilaza ny orinasany raha ohatrinona ny vola azony.
United no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana voalohany nametraka mandidy vaksinin'ny COVID-19 ho an'ireo mpiasany 67,000 XNUMX miampy, tamin'ny voalohan'ny volana aogositra. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa dia nihetsika mba hampitsahatra ny fiarovana ny karama ho an'ireo mpiasa mbola tsy voamarina fa tsara laza amin'ny viriosy. Delta Air-dalana, dia namela fandoavana $ 200 ho an'ny saram-pitsaboana ho an'ireo mpiasa mbola tsy vita vaksiny.
Orinasa amerikanina sy masoivohon'ny governemanta dia takiana amin'ny ara-dalàna ny hanolotra fanavotana amin'ny antony ara-pivavahana na ara-pitsaboana, na dia tsy hanome azy ireo aza izany. Ny fitondrana Biden dia nanery ny handidiana vaksiny ho an'ny daholobe sy tsy miankina satria nitombo ny isan'ny tranga COVID-19 tany Etazonia tamin'ny fahavaratra.
Ny zotram-piaramanidina, sy ny sendikan'ny mpanamory fiaramanidina dia nandray tamim-pahadodonana ny fanitarana toa tsy voafetra ny baikon'ny governemanta, izay napetraka tamin'ny volana febroary ary nokasaina haharitra 100 andro.
United no kaompaniam-piaramanidina amerikana lehibe indrindra fahefatra amin'ny isan'ny mpandeha entina, nefa manana ny fiaramanidina faharoa lehibe indrindra ary manana ny toerana itodiana indrindra, araka ny antontan'isa mialoha ny pandemika.